MIIT မဟာသင်္ကြန်: နှိုးဆော်အပ်ပါသည်...
Ladies and Gentlemen ! You are warmly welcome to participate in this 1369-1370 Myanmar New Year Festival held in our Moscow State University of Railways Engineering(MIIT). You may come and sabbatize together with us for your Navana.
We will take care of you with full facilities such as living, food and so on during THINGYAN Festival.
If anybody wants to donate for our celebration, please contact the following address.
To contact !
Ko Pyai Sone Min ( Ph : 89629018956)
Comittee of Religion
Дамы и Господа! Мы горячо приветствуем тех всем, кто хочет медитировать в этом наступающем фестивале "Тиндьен" (в 1369-1370 году, по Мьянманскую Календарю) могут поступать наш Московский Государственный Университет Путей Сообщение (МИИТ).
Мы обеспечим вас всех в желаниях.
Если тот, кто хочет участвовать в наших пожертвованиях, пожалуйста обращайтесь по адресу.
Пьи Сон Мин (Тел - 89629018956)
သဒ္ဓါကြည်လင် ပါရမီရှင် အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ... မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၉-၁၃၇၀ ခုနှစ် (၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ) တွင် ကျရောက်သော မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ဥပုသ်သီတင်း ဆောက်တည်လိုကြသူ မော်စကိုရောက် မြန်မာ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မီးရထားတက္ကသိုလ် (MIIT) တွင် စုပေါင်းဥပုသ်သီတင်း လာရောက် ဆောက်တည်နိုင်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဥပုသ်သီတင်း လာရောက်ဆောက်တည်သူများ၏ ဝေယျာဝစ္စများအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ မီးရထားတက္ကသိုလ် (MIIT) မြန်မာကျောင်းသားများမှ ကုသိုလ်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ကုသိုလ်ယူ လှူဒါန်းလိုသူများ ရှိပါကလည်း အောက်ပါ လိပ်စာများသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ကိုပြည့်စုံမင်း (ဖုန်း - ၈၉၆၂၉၀၁၈၉၅၆)
ရေးသားသူ။ ။ ဟန်လင်းကျော် အချိန်။ ။ 4:22 PM
အညွှန်း။ ။ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်...
0 ဦး၏ ထင်မြင်ချက်:
“ဥပုသ်” ဆိုသည်မှာ... (1)
ကြည်ညိုဖွယ် ဘုရားခန်း (1)
အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ (5)
ကျွေးမွေးမှု အစီအစဉ် (2)
********** ငါတို့ဖြစ်ရ ၊ ဤလောက၀ယ် ဘ၀သမိုင်း ၊ မရိုင်းစေရန် စိတ်မာန်မချ ၊ မာနမပါ တို့စွမ်းရာဖြင့် ၊ တို့သာသနာ တို့ပြည်ရွာကို ၊ သာယာစေမှု လုံ့လပြုအံ့။********** **********အကုသိုလ်များ ရှောင်ရှားပယ်လေ၊ ကုသိုလ်တရား ဖြစ်ပွါးစုံစေ၊ မိမိစိတ်ဓာတ် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူစေ၊ ဤသုံးပါး ဘုရားဆုံးမပေ။ ပေါ်တိုင်းမပြတ် ရှုမှတ်နေလျှင်၊ ရုပ်နာမ်နှစ်မျိုး ကြောင်းကျိုးသိမြင်၊ မမြဲဆင်းရဲ ဥာဏ်ထဲပေါ်လွင်၊ အနတ္တ သိရနိဗ္ဗာန်ဝင်....**********
**********မဂ္ဂင်ရှစ်ဖြာ မရှိရာ ကိလေသာ ငြိမ်းသူမရှိချေ၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ဖြာ ရှိရာမှာ ကိလေသာ ငြိမ်းသူ ရှိနိုင်ပေ၊ မူလ ပုဗ္ဗ အရိယ သုံးဝမဂ္ဂင်မြတ်၊ ဖြစ်ပွားစေလျှင် ဤမဂ္ဂင် ပြေးဝင် နိဗ္ဗာန်ဓါတ်၊ ဖြစ်ပျက်မြင်မှ အနိစ္စ ဒိဌသိနိုင်သည်။********** **********ခန္ဓာရတွက်၊ သေဖို့ရက်၊ ချိန်းချက်မရှိကြ။ သေခါနီးမှာ နိမိတ်လာ ရောက်ရာဘုံဘ၀။ ငရဲစရှိ ဒုဂ္ဂတိ မြင်ဘိ ထိုကာလ။ ရင်းတွင်းလှိုက်ပူ ပွက်ပွက်ဆူ ကယ်သူဝေးမည်ပ။ ဘယ်သား ဘယ်သမီး ဘယ်ပစ္စည်း ချီးနှီးထိုကာလ။ မသာနှလုံး သေလွန်ဆုံး အရှုံးနာကြည်းစွ။ ချိန်မနှောင်းခင် ယခုပင် မြန်လျှင်အားထုတ်ကြ။ မဂ္ဂင်မှသာ အားကိုးရာ ခေမာဖြောင့်တန်းလှ။ အကုသလာ ကြွေးတွေဟာ များစွာအနန္တ။ မဂ်ဉာဏ်ဆိုက်ရောက် ကြွေးကုန်ပျောက် ကဲမောက်လွန်ချမ်းမြ။**********
Design by: ModelsSky